रंगभेद र गोरा शासकहरुबारे अफ्रिकी राष्ट्रपती मुगाबेका रोचक टिप्पणी :: NepalPlus
अफ्रिकी देश जिम्बावेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे सीधा, हाकाहाकी बोल्ने र जिद्दीको लागि प्रसिद्ध थिए । उनी लगभग चार दशक सत्तामा रहे । त्यो अवधिको शासनकालको दौरानमा हाँस्ने वा विवादास्पद टिप्पणी गर्न उनको नाम चर्चित रह्यो । शासनसत्ता सम्हालेको लामो इतिहास बोकेका उनलाई त्यसैकालागि सम्झिनेछन् । राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेका भाषणहरू व्यंग्यका साथ चित्रण गरिएको हुन्थ्यो । उनको हाँस्य भावले उनलाई रोचक व्यक्तित्व बनाईदियो । मुगाबेका सबैभन्दा चाखलाग्दो र विवादास्पद उद्धरणहरू हेरौं-
-सेतो मानिस अफ्रिकाको लागि आदिवासी होइन । अफ्रिका अफ्रिकीवासीहरूको लागि हो । जिम्बावे जिम्बावेको लागि हो । गोरा मान्छे यहाँ दोस्रो नागरिकको रूपमा छ ।
-सेतो किसानका हत्यारहरूको मुद्दा चलाउनु हुँदैन । (White farmers’ killers should not be prosecuted.)
-जबसम्म सेतो कारहरूले कालो टायरहरू प्रयोग गरिरहन्छन् जातीय भेदभाव कहिले समाप्त हुँदैन ।
-मानिसहरूले खराब भग्यको प्रतीक ( Black for Bad Luck) को रूपमा कालो र शान्तिको लागि सेतो (White for Peace) प्रयोग गर्छन् भने जातिवाद कहिल्यै अन्त्य हुँदैन ।
-मानिसहरुले विवाह समारोहमा सेतो लुगा र अन्त्येष्टिहरुमा कालो वस्त्र लगाइरहने हो भने रंगभेद कहिल्यै अन्त्य हुँदैन ।
-हामीले पहिले सेतो लुगा धुने र अरु रङका लुगा पछि वा फूर्सदमा धुने गरुन्जेल रंगभेद अन्त हुँदैन।
-आफ्नो बिल नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने, सेतो सूचीमा नराख्ने गरुन्जेल रंगभेदको कहिल्यै अन्त हुने छैन ।
-जबसम्म मेरो शौचालयको बस्ने ठाउँ सेतो रङको छ र म मेरो मलद्वार अझै पनि सेतो ट्वाईलेट पेपरले पुच्छु भने म कालो हुनुमा मतलव गर्दिन ।
समलिङ्गी र समलिङ्गी विवाह बारे
-समलैंगिकता एक फोहोर रोग हो र कहिल्यैपनि समलिंगीलाई समर्थन गरिने छैन ।
-कुनै सहायता दिँदा हामीमाथि समलिंगि विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने शर्त राखिन्छ भने त्यस्तो सहायता लिन्नौं, यो त्यतै राखे हुन्छ ।
-हामी सोध्छौं, के उनी समलिंगीत्वबाट जन्मेका थिए ? हामीलाई हाम्रो जातिमा निरन्तरता चाहिन्छ । र त्यो महिलाबाट प्राप्त हुन्छ र समलिंगी पुरुषबाट होइन । तिनीहरू कुकुर र सुँगुरहरू भन्दा खराब छन् ।
-अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अफ्रिका आए भन्दैमा अफ्रिकाले समलिंगी विवाहलाई अनुमति दिनुपर्दछ भन्ने छैन । यस्तै पापहरूको कारण भगवानले पृथ्वीलाई नष्ट गर्नुभयो । विवाह पुरुष र महिलाको लागि हो ।
-हाम्रो अर्थव्यवस्था औसत अफ्रिकी अर्थव्यवस्था भन्दा सय गुणा राम्रो छ । दक्षिण अफ्रिका बाहिर, कुन देश जिम्बाब्वेको जस्तो राम्रो छ ? हाम्रोमा अहिले के कुराको अभाव छ भने दराज र तखतामा सामान छैनन् त्यत्ति हो ।
मलाई नियुक्त गरेको भगवानहो । त्यसैले केवल भगवानले मलाई हटाउनुहुने छ । एमडीसी (विपक्ष) ले होइन । बेलायतीहरूले होइन ।
नेल्सन मन्डेला बारे
-मण्डेला गैर-कालो समुदायलाई राम्रो गर्न धेरै टाढासम्म पुगे । वास्तवमा केही घटनामा (अश्वेतहरू) को खर्चमा उनले धेरै गरे गोराकालागि ।
-मण्डेलाले काला दक्षिण अफ्रिकीवासीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रताको तुलनामा आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिए ।
-दक्षिण अफ्रिकाका गोरेले जमिन, उद्योग र कम्पनीहरू नियन्त्रण गर्छन् र मन्डेलाले जग्गाको मुद्दालाई वेवास्ता गरेर ठूलो गल्ती गरेका थिए ।
आफ्नै म्रित्युको झुठा रिपोर्टहरुबारे
-म धेरै चोटि मरें । यही ठाउँमा मैले ख्रीष्टलाई कुटें । ख्रीष्ट एक पटक मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो । म पटक पटक मर्दछु र पुनरुत्थान हुन्छु । मलाई थाहा छैन म कति पटक मरें र पुनरुत्थान हुन्छु ।
आफ्नो राजिनामा बारे
-राजीनामा गर्ने मेरो निर्णय मेरो तर्फबाट स्वैच्छिक हो । यो जिम्बावेका जनताको हितको लागि मेरो चिन्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र स्थायित्वलाई सुदृढ, शान्तिमय र अहिंसात्मक शक्तिको स्थानान्तरण सुनिश्चित गर्ने मेरो चाहनाबाट उत्पन्न भएको हो । कसैको करबलले होइन ।